ဒီလို လူမြိုးတှနေဲ့ လုံးဝ ခရီးအတူမသှားသငျ့ပါဘူးနျော – Myanmar
September 5, 2020 admin Knowledge, Life Style 0
ခရီးသှားဖို့ သူငယျခငျြးမိတျဆှတှေနေဲ့ တိုငျပငျဖူး သှားဖူးပါသလား ? အတှအေ့ကွုံက ဘယျလိုလဲ? ခရီးသှားရတာကို လူတိုငျးက ကွိုကျကွပါတယျ။ အလုပျကိစ်စနဲ့ ဖွဈဖွဈ အပနျးဖွခေရီး စှနျ့စား ခရီးသှားတာဖွဈဖွဈ ပလနျခပြွီး အဖျောနဲ့ သှားမှ ပိုပြျောစရာကောငျးပွီး အမှတျတရတှေ ဖနျတီးနိုငျ မှတျတမျးတငျနိုငျမှာပါ ။ခရီးသှားတဲ့လူတှမှောလညျး တဈယောကျနဲ့တဈယောကျ အကွိုကျခငျြးကမတူညီကွပါဘူး။ အကွိုကျခငျြးတူတဲ့ လူတှစေုပေါငျးပွီး ခရီးသှားရတာက စိတျပြျောစမှော ဖွဈပါတယျ။
ဘာပွောပွော ခရီးသှားတဲ့အခြိနျမှာ အတူတူမသှားသငျ့တဲ့ လူမြိုးတှရှေိပါတယျ။ ခရီးစဉျကို တမငျဖကျြလိုဖကျြစီးလုပျခငျြတဲ့ စိတျမရှိပမေယျ့ သူတို့တှရေဲ့ အကျြသ့လေးတှကေ ခရီးသှားဖျောတှကေို စိတျအနှောကျအယှကျဖွဈစပေါတယျ။ ဘယျလိုလူတှလေဲ ဆိုတာ ကွညျ့လိုကျရအောငျ ။
ဘယျသှားမယျ ဘယျလာမယျ ဆိုပွီး ပွငျဆငျထားပမေယျ့ အခြိနျမှီမထနိုငျတာ အဆငျသငျ့မဖွဈတာတှကေ သငျ့တို့ရဲ့ ပြျောစရာ ခရီးစဉျကို စိတျအနှောကျအယှကျ ပေးမှာကတော့ သခြောပါတယျ။နောကျကတြဲ့ ခွထေောကျ သစ်စာဖောကျဆိုသလို အပငျြးကွီးလှနျးသူတှကေ တကယျတော့ သစ်စာဖောကျလေးတှပေါ
တဈခြို့ခရီးစဉျတှကေ ဇိမျခံတဲ့ခရီးစဉျတှဖွေဈခငျြမှဖွဈပါလိမျ့မယျ။ ပွီးတော့ တဈခြို့နရောတှကေ အစားအသောကျ အကနျ့အသကျရှိတဲ့နရောတှေ ဖွဈကောငျးဖွဈနပေါလိမျ့မယျ။ ဒီလိုအခွအေနမြေိုးတှမှော အစားအသောကျ ဂြီးမြားသူတှကေို ချေါသှားလိုကျရငျ ဘယျလိုမှအဆငျမပွနေိုငျပါဘူး။ ဒီလိုလူမြိုးတှနေဲ့ ခရီးသှားမယျဆိုရငျ စားသောကျဆိုငျရှေးနရေတာနဲ့တငျ တဈနကေုနျသှားနိုငျပါတယျ။
ဘယျအရာကိုမဆို အကောငျးမွငျတတျတဲ့ ဒီလိုလူတှကေ အာရုံပေးနိုငျပါတယျ။ စီးလာတဲ့ကားကအစ တညျးတဲ့အခနျးကအဆုံး အပွဈရှာပွီး ညညျးပွနတေကျတဲ့သူမြိုးပါ။ ခရီစဉျတခုမှာ ဒီလိုလူမြိုးပါရငျလညျး စိတျအနှောကျအယှကျ ဖွဈရပါတယျ။ ဘယျလိုတှပေဲ စီစဉျပေးပမေယျ့ စိတျတိုငျးမကဘြဲ ညညျးလှနျးတာကွောငျ့ ခရီးစဉျမှာ ကိုယျပါ မပြျောမရှငျ ဖွဈရတတျပါတယျ။
နှဈယောကျစလုံးနဲ့ဖွဈစေ တဈယောကျခငျြးစီနဲ့ဖွဈစေ ဘယျလိုမှတှဲသှားလို့အဆငျမပွတေဲ့သူတှပေါ။ သူတို့နဲ့ အတူသှားမယျဆိုရငျ အနညျးဆုံးတော့ စုံတှဲပုံလေးတှေ ရိုကျပေးဖို့သာပွငျထားပါ။ ပွီးတော့ ခရီးသှားရတာ သူတို့ရဲ့အရိပျအကဲလညျး ကညျ့ရပါသေးတယျ။ စုံတှဲတို့ သဘာဝအတိုငျး အခနျ့မသငျ့တာတခုခုရှိရငျ စိတျဆိုးစိတျကောငျ ရနျဖွဈတကျကွတယျ။ ဒါတှကေ ခရီးစဉျမှာ စိတျအနှောကျအယှကျ ဖွဈစပေါတယျ။
ရညျးစားရှိတဲ့သူကို တဈယောကျထညျးချေါထုတျသှားရငျလညျး သိပျပွီးအဆငျမပွလှေဘူး။ ခဈြသူရညျးစားနဲ့ ဖုနျးပွောရတာတှေ တနရောရာရောကျရငျ အကွောငျးကွား မကျဆေ့ ပို့နရေတာတှေ Video call ချေါပွရတာတှနေဲ့ ခရီးသှားဖျောတှကေို စိတျအနှောကျအယှကျဖွဈစပေါတယျ။ ဒီလိုလူမြိုးတှနေဲ့ ဖွဈနိူငျရငျ ခရီးအတူမသှားပါနဲ့။သငျကရော ဘယျလိုခရီးသှားဖျောတှနေဲ့ သှားဖူးလဲ အတှအေ့ကွုံကို မြှဝသှေားပါဦး ။
ခရီးသွားဖို့ သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေနဲ့ တိုင်ပင်ဖူး သွားဖူးပါသလား ? အတွေ့အကြုံက ဘယ်လိုလဲ? ခရီးသွားရတာကို လူတိုင်းက ကြိုက်ကြပါတယ်။ အလုပ်ကိစ္စနဲ့ ဖြစ်ဖြစ် အပန်းဖြေခရီး စွန့်စား ခရီးသွားတာဖြစ်ဖြစ် ပလန်ချပြီး အဖော်နဲ့ သွားမှ ပိုပျော်စရာကောင်းပြီး အမှတ်တရတွေ ဖန်တီးနိုင် မှတ်တမ်းတင်နိုင်မှာပါ ။ခရီးသွားတဲ့လူတွေမှာလည်း တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အကြိုက်ချင်းကမတူညီကြပါဘူး။ အကြိုက်ချင်းတူတဲ့ လူတွေစုပေါင်းပြီး ခရီးသွားရတာက စိတ်ပျော်စေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဘာပြောပြော ခရီးသွားတဲ့အချိန်မှာ အတူတူမသွားသင့်တဲ့ လူမျိုးတွေရှိပါတယ်။ ခရီးစဉ်ကို တမင်ဖျက်လိုဖျက်စီးလုပ်ချင်တဲ့ စိတ်မရှိပေမယ့် သူတို့တွေရဲ့ အျက်သ့လေးတွေက ခရီးသွားဖော်တွေကို စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေပါတယ်။ ဘယ်လိုလူတွေလဲ ဆိုတာ ကြည့်လိုက်ရအောင် ။
ဘယ်သွားမယ် ဘယ်လာမယ် ဆိုပြီး ပြင်ဆင်ထားပေမယ့် အချိန်မှီမထနိုင်တာ အဆင်သင့်မဖြစ်တာတွေက သင့်တို့ရဲ့ ပျော်စရာ ခရီးစဉ်ကို စိတ်အနှောက်အယှက် ပေးမှာကတော့ သေချာပါတယ်။
နောက်ကျတဲ့ ခြေထောက် သစ္စာဖောက်ဆိုသလို အပျင်းကြီးလွန်းသူတွေက တကယ်တော့ သစ္စာဖောက်လေးတွေပါ ။
တစ်ချို့ခရီးစဉ်တွေက ဇိမ်ခံတဲ့ခရီးစဉ်တွေဖြစ်ချင်မှဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ပြီးတော့ တစ်ချို့နေရာတွေက အစားအသောက် အကန့်အသက်ရှိတဲ့နေရာတွေ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ ဒီလိုအခြေအနေမျိုးတွေမှာ အစားအသောက် ဂျီးများသူတွေကို ခေါ်သွားလိုက်ရင် ဘယ်လိုမှအဆင်မပြေနိုင်ပါဘူး။ ဒီလိုလူမျိုးတွေနဲ့ ခရီးသွားမယ်ဆိုရင် စားသောက်ဆိုင်ရွေးနေရတာနဲ့တင် တစ်နေကုန်သွားနိုင်ပါတယ်။
ဘယ်အရာကိုမဆို အကောင်းမြင်တတ်တဲ့ ဒီလိုလူတွေက အာရုံပေးနိုင်ပါတယ်။ စီးလာတဲ့ကားကအစ တည်းတဲ့အခန်းကအဆုံး အပြစ်ရှာပြီး ညည်းပြနေတက်တဲ့သူမျိုးပါ။ ခရီစဉ်တခုမှာ ဒီလိုလူမျိုးပါရင်လည်း စိတ်အနှောက်အယှက် ဖြစ်ရပါတယ်။ ဘယ်လိုတွေပဲ စီစဉ်ပေးပေမယ့် စိတ်တိုင်းမကျဘဲ ညည်းလွန်းတာကြောင့် ခရီးစဉ်မှာ ကိုယ်ပါ မပျော်မရွှင် ဖြစ်ရတတ်ပါတယ်။
နှစ်ယောက်စလုံးနဲ့ဖြစ်စေ တစ်ယောက်ချင်းစီနဲ့ဖြစ်စေ ဘယ်လိုမှတွဲသွားလို့အဆင်မပြေတဲ့သူတွေပါ။ သူတို့နဲ့ အတူသွားမယ်ဆိုရင် အနည်းဆုံးတော့ စုံတွဲပုံလေးတွေ ရိုက်ပေးဖို့သာပြင်ထားပါ။ ပြီးတော့ ခရီးသွားရတာ သူတို့ရဲ့အရိပ်အကဲလည်း ကည့်ရပါသေးတယ်။ စုံတွဲတို့ သဘာဝအတိုင်း အခန့်မသင့်တာတခုခုရှိရင် စိတ်ဆိုးစိတ်ကောင် ရန်ဖြစ်တက်ကြတယ်။ ဒါတွေက ခရီးစဉ်မှာ စိတ်အနှောက်အယှက် ဖြစ်စေပါတယ်။
ရည်းစားရှိတဲ့သူကို တစ်ယောက်ထည်းခေါ်ထုတ်သွားရင်လည်း သိပ်ပြီးအဆင်မပြေလှဘူး။ ချစ်သူရည်းစားနဲ့ ဖုန်းပြောရတာတွေ တနေရာရာရောက်ရင် အကြောင်းကြား မက်ဆေ့ ပို့နေရတာတွေ Video call ခေါ်ပြရတာတွေနဲ့ ခရီးသွားဖော်တွေကို စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေပါတယ်။ ဒီလိုလူမျိုးတွေနဲ့ ဖြစ်နိူင်ရင် ခရီးအတူမသွားပါနဲ့။
သင်ကရော ဘယ်လိုခရီးသွားဖော်တွေနဲ့ သွားဖူးလဲ အတွေ့အကြုံကို မျှဝေသွားပါဦး ။